Wararka - TBIT waxay ka caawisaa TMALL e-baaskiil si uu u yeesho waxqabad wanaagsan ganacsiga dhaqdhaqaaqa korantada
TBIT waxay ka caawisaa TMALL e-baaskiil si uu u yeesho waxqabad wanaagsan ganacsiga dhaqdhaqaaqa korantada
2020, waa sanad aad u wanaagsan dhamaan warshadaha labada lugood ee baaskiilka elektaroonigga ah. Faafida COVID-19 ayaa kicisay iibka elektrooniga ah ee labada lugood leh ee adduunka oo dhan. Waxaa jira ilaa 350 milyan oo baaskiilada elektaroonigga ah ee Shiinaha, celceliska wakhtiga uu qof kasta fuuli karo waa qiyaastii 1 saac maalintii. Ma aha oo kaliya qalab gaadiidka caadiga ah, laakiin sidoo kale goobta isdhexgalka ee dad badan oo qulqulaya gelitaanka iyo boqolaal milyan oo safar ah. Xoogga ugu muhiimsan ee suuqa macaamiisha ayaa si tartiib tartiib ah u bedelay kuwii ku dhashay 70s iyo 80s ilaa kuwa ku dhashay 90-meeyadii iyo 00-meeyadii. Jiilka cusub ee kooxaha macaamiisha kuma qanacsana baahida gaadiidka fudud ee baaskiillada elektaroonigga ah. Waxay raadinayaan adeegyo caqli badan, ku habboon oo bini'aadantinimo leh.
E-baaskiilku wuxuu noqon karaa mid caqli badan terminal. Iyada oo loo marayo xogta daruuraha, waxaan si sax ah u ogaan karnaa xaalada caafimaad ee baaskiilka elektaroonigga ah, inta ka hartay batariga, qorshee wadada fuusha, oo aan diiwaangelin karno dookhyada safarka ee milkiilaha.Xitaa mustaqbalka, hawlgallo taxane ah sida dalbashada codka iyo lacag-bixinta ayaa lagu dhammeyn karaa iyada oo loo marayo e-bike. Xog weyn oo ku salaysan sirdoonka macmal iyo xisaabinta daruuraha, mowjadda cusub ee kacaanka tignoolajiyada macluumaadka, isku xirka wax walba ayaa noqday daruuri. Marka e-baaskiiladaha ay la shaqeeyaan sirdoonka macmal iyo Internet of Things, smart cusub Qaabaynta deegaanka ayaa soo galin doonta.
Iyada oo ay weheliso kobcinta dhaqaalaha wadaagga iyo isbeddelka lithium-ionization, iyo sidoo kale natiijooyinka cajiibka ah ee hirgelinta halbeegga cusub ee qaranka muddo hal sano ah, warshadaha baaskiillada ee labada lugood leh ayaa keenay fursado horumarineed oo aan horay loo arag. Si kastaba ha noqotee, sida warshadaha kale ee dhaqameed, dillaaca baahida loo qabo baaskiilada labada lugood leh ayaa sidoo kale soo jiidatay indhaha shirkadaha internetka. Marka loo eego xaddidaadda "wadista wadista" ee baaskiillada korantada ee caqliga leh iyo e-mootada, diiradda istiraatijiyadeed waxaa loo wareejiyay suuqa baaskiillada elektaroonigga ah.
Si aad u sheegto in isbeddelka ugu weyn ee warshadaha elektaroonigga ah ee labadii sano ee la soo dhaafay ay tahay hirgelinta heerka cusub ee qaranka ee baaskiilada elektaroonigga ah. Kadib hirgelinta halbeegga cusub ee qaranka, baaskiilka elektaroonigga ah ee heer qaran ayaa noqon doona suuqa ugu muhiimsan. Tani waxay suuqa elektaroonigga ah u keenaysaa saddex fursadood oo waaweyn: Isticmaal baaskiilka elektaroonigga ah ee heerka qaranka, beddelka baytariyada acid-ashitada ilaa baytariyada lithium, iyo internetka. Saddexdan fursadood ee waaweyni waxay soo galeen dhammaan warshadaha e-baaskiil-baaskiilada. Dhab ahaantii, shirkadaha waaweyn ee internetka ayaa diiradda saaraya ganacsiga laba-geesoodka ah ee e-bike, ma aha oo kaliya qiimaha faa'iidada weyn ee warshadaha e-bike ee laba-geesoodka ah ee hoos yimaada qulqulka. baahida, laakiin doorasho lama huraan u ah horumarinta wakhtiyada.
Markay ahayd Maarso 26, 2021, Shirka Dhaqdhaqaaqa Wacan ee TMALL E-bike Smart iyo Shirka Maalgelinta Warshadaha Labada Lugood ayaa lagu qabtay Tianjin. Shirkani waxa uu ku salaysan yahay jihada cusub ee sirdoonka macmal iyo IOT, isaga oo keenaya xaflad saynis iyo tignoolajiyada dhaqdhaqaaqa deegaanka oo caqli badan.
Shirka jaraa'id ee TMALL wuxuu tusay qof kastaa hawlaha xakamaynta e-baaskiilada by Bluetooth/Barnaamijka mini/APP kantaroolka e-bike, baahinta codka la habeeyey, furaha dhijitaalka ah ee Bluetooth, iwm. . Isticmaalayaashu waxay isticmaali karaan telefoonadooda gacanta. Samee taxane ah hawlgallo caqli-gal ah sida kontoroolka qufulka beddelka iyo dib-u-ciyaarista cod ee baaskiillada elektaroonigga ah. Ma aha oo kaliya, laakiin waxaad sidoo kale xakameyn kartaa nalalka elektaroonigga ah iyo qufullada fadhiga.
Xaqiijinta hawlahan casriga ah ee ka dhigaya e-baaskiil dabacsanaan iyo caqli badan waxaa xaqiiqsaday badeecada TBIT WA-290 oo ay iska kaashadaan TMALL.TBIT waxay si qoto dheer u beeratay beerta elektaroonigga ah waxayna abuurtay e-baaskiil smart, e-bike kirada, wadaaga baaskiilka elektaroonigga ah iyo meelaha kale ee maaraynta safarka. Iyada oo loo marayo tignoolajiyada internetka ee mobilada ee smart iyo IOT smart, garwaaqso maamulka saxda ah ee baaskiillada elektaroonigga ah, oo la kulan xaalado kala duwan oo dalabka suuqa ah.
Ilaa hadda, qalabka casriga ah ee TBIT iyo aaladda smart IOT waxay siiyeen adeegyo socdaal oo caqli badan in ka badan 100 milyan isticmaaleyaasha adduunka oo dhan. Madalkeeda smart ayaa leh in ka badan 200 oo wada-hawlgalayaal gudaha iyo dibadda ah, shixnadaha ay ku xiran yihiinna waxay ka badan yihiin 5 milyan. Mootooyinka elektaroonigga ah ee caqliga leh waxay noqdeen isbeddel guud. Dadka, baaskiiladaha elektaroonigga ah, bakhaarrada, iyo warshadaha ayaa loo dhisay si fiican u xidhxidhan deegaanka. Iyada oo loo marayo hawlgallada iyo adeegyada ku saleysan xogta, summadaha si fiican ayey u fahmi karaan isticmaaleyaasha, alaabadu aad ayey isugu dhow yihiin, adeegyadu aad ayey ugu habboon yihiin, khibradda isticmaale ayaana ka wanaagsan. Tani waxay xallisaa dhibaatada dadka iyo baaskiilada elektaroonigga ah ee xilli-dhaqameed. Cilladaha xogta ee dukaamada iyo warshadaha